ဗဟုသုတ – Page 3
ဆယ်နှစ်စာလောက် နုပျိုစေမယ့် ထမင်းရည်နဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း
October 13, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကပါ ကိုယ့်ရဲ့အလှလျှို့ဝှက်ချက်ကို မေးမြန်းလာကြရ စေမယ့် အလှအပရေးရာ ပြုပြင်နည်းတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာတင် ရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ဆယ်နှစ်စာလောက် ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ အသားအရေအလှကို ရရှိပိုင် ဆိုင်နိုင်မယ့် ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ ဂျပန်လူမျိုးတို့ အစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်း သုံးစွဲခဲ့ကြတဲ့ နည်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်မှာ အစွမ်းထက်လှတဲ့ အန်တီအောက်ဆီးဒင့်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး အသားအရေကို လှပဖြူဝင်းစေတဲ့ ကိုလေဂျင်ဓာတ် ကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပါးရေတွန့်ခြင်းနဲ့ အရေးအကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ပါသေး တယ်။ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကြောင့်ပဲ ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့အထိ နုပျိုလှပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းရည်ကို Toner အဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ပြီး […]
သင်​ အိုဇာတာ​ကောင်းချင်​လျှင်​ အိမ်​​ထောင်း​ရေး ​ဖောက်​ပြန်​ပြီး မယားအငယ်​ မထားပါနဲ
အိမ်ကမယားကြီးကို ရိုးအီနေပြီး အပြင်က (ပိုက်ဆံသာရရင် ဘာမဆို လုပ်မယ်) ဆိုတဲ့ ပြီတီတီ ညို့တုတုလုပ်တတ်သူ (smallလေး)တွေကို စွဲလမ်းပြီးစိတ်ကူးယဉ် သာယာနေတတ်တဲ့ သင့်ကိုသင် ဟုတ်လှပြီအထင်နဲ့ပျော်မနေပါနဲ့ . .သင်စဉ်းစားကြည့်ပါ…သင်ခုလို မအောင်မြင်ခင်တုန်းက ..သင့်ကို အဖက်ဖက်ကနေ အစွမ်းကုန် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားတက်သရော်ကူညီ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်သူဟာ ဘယ်သူလဲ? သင် ပင်ပင်ပမ်းပမ်း ရှာဖွေလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို လေလွင့်မှုမရှိအောင် အပိုငွေမကုန်အောင် မစားရက်မသောက်ရက် မသုံးရက်​ မဖြုန်းရက်​ ချိုးခြံချွေတာပြီးစုဆောင်းပေးတတ်သူဟာ ဘယ်သူလဲ? လောကဓံကြောင့် သင် ရှုံးနိမ့်နေချိန် လဲကျနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ကိုယ်လွတ်မရုန်းပဲ သင့်ရဲ့အပူတွေကို သည်းခံ မျှဝေပေးတတ်သူ ဟာ ဘယ်သူလဲ? သင့်ဘက်ကနေ အမြဲတမ်းရပ်တည်ပေးပြီး ဒုက္ခမှန်သမျှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ပေးရဲသူ သင့်အတွက် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်​ အပြည့် […]
အမျိုးသမီးတွေ ဗလာကျင်းနေမယ့်နေ့ အောက်တိုဘာ ၁၃ #nobraday
ဒီကနေ့က အမျိုးသမီးများ အပေါ်အတွင်းခံ ဘလာစီယာများ မ၀တ်ဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းက အမျိုးသမီးများကို အဓိက ခြိမ်းခြောက်နေသော ရင်သားကင်ဆာ ကို သတိမူစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော No Bra Day နေ့ ဖြစ်နေလို့ပါ ။ အောက်တိုဘာလက ရင်သားကင်ဆာ အသိပညာပေးလ ဖြစ်သလို့ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း #nobraday hashtag ကမ်ပိန်းကို လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ အမျိုးသမီးများက အသိပေး ပုံများ ၊ စားများ တင်ပြီး ရင်သားကင်ဆာ ကို အမျိုးသမီးတိုင်း သတိမူကြစေရန် ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ No Bra Day Campaign ကို ၂၀၁၁ ခုနစ် […]
ချစ်စွာသောမမတို့ ညီမတို့ ဒါတွေသိရဲ့လား
ချစ်စွာသောမမတို့ ညီမတို့ ဒါတွေသိရဲ့လား တရုတ်ပြည်မှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်- – – ၁။စစ်မှန်သောဗီဇာပါရဲ့လား ၂။သင်အားကိုးလောက်တဲ့မိတ်ဆွေရှိရဲ့လား။ ၃။သူတို့စကား ကို နားလည်ရဲ့လား။ ၄။ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လား။ ၅။တနေ့ လုပ်ချိန်ဆယ်နာရီလုပ်နိုင်ရဲ့လား။ ၆။သင်ထမင်းစားတိုင်းဝက်ဆီနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဟင်းကို စားနိုင်ရဲ့လား။ ၇။အအေးလွန် အပူလွန် ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရဲ့လား။ ၈။သူတို့ဖမ်းချင်လျှင် သင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ နေထိုင်ခွင့်စာအုပ်ကို ဆုပ်ဖြဲပြီးဖမ်းပါလိမ့်မယ်။ ၉။တရုတ်ပြည်မှာ မိန်းမဈေးကြီးတဲ့အတွက် သင့်ကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ပြီး တိတ်တိတ်ပုန်းမယားအဖြစ် သုံးနှစ်သို့မဟုတ်ငါးနှစ် ပြုလုပ် စေပါလိမ့်မယ်။ ၁၀။သင့်ကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကျ အသုံးချပြီးပြီဆိုရင်​ တော့လျှော့ဈေးနဲ့ တဆင့်ရောင်းချပါလိမ့်မယ်။ 🐄🌿ခွေးသားပေါက်လုပ်ငန်း🌿🐄 တကယ်လို့သင်သာ ခွေးသားပေါက်လုပ်ငန်းကိုရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်။ရောက်ရောက်ခြင်း သင်ပျော်ရွှင်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ငါ့မိဘမွေးချင်းတောင် ဒီလောက်မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ အထင်ရောက်စေမှာပါ။ *ကျနော်တို့ ချစီးမဲ့ ကတ္တီပါ ဖိနပ်*လေးကို တိုက်ချွတ်သလိုမျိုးပေါ့။အစားကောင်းအသောက်ကောင်းတွေကျွေးမယ်။ရောက်စမှာတော့ သင့်အလုပ်ကရေချိုးမယ် စားမယ်သောက်မယ်အလှပြင်မယ်ပေါ့ဗျာ။ […]
မြန်မာ ရဲ့ တစ်နာရီ လုပ်အားခ ကို ကမ္ဘာ နဲ့ယှဉ်လိုက်သောအခါ
ကိုယ့်ရဲ့တစ်နာရီ ဝင်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို တွက်ကြည့်ဖူးရဲ့လား။တစ်လကို ၂ သိန်းလောက်ရတဲ့သူဆိုရင်တော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ကိုဖယ်လိုက်ရင် တစ်လကိုရက်နှစ်ဆယ် အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒါဆို တစ်ရက်လုပ်ခ ၁ သောင်းပေါ့။ တစ်နေ့ကို အလုပ်ချိန် က ရှစ်နာရီ ဆိုတော့ တစ်နာရီကို ၁၂၅၀ ကျပ်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက် အနည်းဆုံး လုပ်အားခ ကို တစ်ရက် ကို ၃၆၀၀ ကျပ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်နာရီ ကို ၄၅၀ ပေါ့လေ။ အခု ကမ္ဘာမှာ တစ်နာရီ လုပ်ခ နှုန်းထား တွေ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်။ ဒီ စာရင်း ကိုတော့ Economic Cooperation and Development (OECD) က […]
အချုပ်ခန်းနဲ့ အိမ်မှားတဲ့ အရက်သမားက လူမိုက်ဖိုးတေကို မိန်းမမှတ်လို့ တက်ခွသတဲ့..။
ညတစ်​ညမှာ အရက်​သမား တစ်​​ယောက်​ ဟာ အရက်​ အရမ်းမူးပြီး အိမ်​ မပြန်​တတ်​ပဲ ရွာ လည်​​နေပါတယ်​ ” ဒိုးခ ဘဲကွာ – ငါ အိမ်​ကို ဘယ်​လို ပြန်ရမလဲ ​မသိ​တော့ဝူး ​အေ့ – ”အရက်​သမားက ယိုင်​တိ ယိုင်​တိုင်​ဖြင့် လျှောက်​လာရင်း ရဲစခန်း ​ရှေ့သို ​ရောက်လာတယ်​။ရဲစခန်း​ရှေ့မှ “ကူညီပါရ​စေ “ဆိုင်းဘုတ်​အား မြင်​သွားတဲ့အခါ” ဟား အ​တော်​ပဲ ” ကူညီပါရ​စေ “တဲ့ ဝင်ပြီး အကူအညီ ​တောင်းကြည့်​မှ ”အရက်​သမားက ရဲစခန်း အတွင်းသို့ ယိုင်​တိ ယိုင်​တိုင်​ဖြင့်​ ဝင်​လာပြီး အရင်​ဆုံး​တွေ့တဲ့ ရဲသားကို ​ပြောလိုက်​တယ်​” ​ဟျောင့်​ – ငါ လမ်း​ပျောက်​​ နေလို့ကွာ -အဲ့ဒါ […]
ချစ်တင်းနှောပြီးတာနဲ့ အပေါ့သွား (ဆီးသွား)လိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (UTI) မဖြစ်အောင် ချစ်တင်းနှောပြီးတာနဲ့ အပေါ့သွားကြပါလို့ မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေအနေန့ ချစ်တင်းနှောပြီးပြီးချင်းမှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချက်ခြင်း ပြန်မဝတ်သင့်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အပေါ့သွားချင်သည်ဖြစ်စေ မသွားချင်သည်ဖြစ်စေ အပေါ့သွားဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါမှ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေ ဆီးနဲ့အတူ ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ UTI ဟာ ချစ်တင်းနှောနေစဉ်အတွင်း မိန်းမကိုယ်ထဲကို ဘက်တီးရီးယားတွေ ဝင်ရောက်ရှင်သန်ရာကနေ စဖြစ်တတ်လို့ပါပဲ။ မိန်းမကိုယ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝိုက်မှာ ချွေး၊ သုက်ရည်၊ ချောဆီ စတာတွေ စိုစွတ်နေရင်လည်း တစ်ရှုးစက္ကူနဲ့ သုတ်ပစ်ရပါမယ်။ စိုစွတ်နေရင် ဘက်တီးရီးယားတွေ ပိုကပ်နိုင်လို့ပါ။ ခြောက်သွေ့အောင် […]
ယောက်ျားလေးကသူ့ကိစ္စ အပြင်မှာ ပြီးတယ်ဆိုရင် မိန်းကလေးမှာ ကိုယ်ဝန် မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ . . . . .။
မေး။ ။ ဆရာ ဆူဒိုနင်ရှင့်… သမီး သိလိုသည့် အချက်အလက်များကို အနည်းငယ် မေးမြန်းလိုပါသည်ရှင့်… သမီးက အိမ်ထောင်ကျပြီးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်ကတော့ ခြောက်လပြည့်ပါတော့မယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးရမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားလေးက သူ့ကိစ္စ ပြီးတဲ့အခါ အပြင်မှာ ပြီးတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။ အဲ့လို ဆိုလို့ ရှိရင် မိန်းကလေးမှာ ကိုယ်ဝန် မရှိနိုင်ဘူးလို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။တကယ်လည်း သမီးတို့ လင်မယား အဲ့လိုပဲ နေထိုင်ပါတယ်။ (သမီးက ဆေးသောက်ရမှာ ကြောက်လို့ပါ။) ဒါပေမယ့် တစ်ကြိမ်ကို တစ်ခါပဲ ဆက်ဆံတာပါ။ (ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ တစ်ရက်ကို တစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်ကို တစ်ခါပဲလို့ ဆိုလိုတာပါရှင့်။) အဲ့ဒီလို […]
အောက်ခံဘောင်းဘီကြောင့် သက်တောင့်သက်သာမရှိရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို အမျိုးသမီးတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ ။ ဒီလို အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေဟာ တကယ်ပဲ နေ့စဉ်ဝတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ ။ မဝတ်တော့ရော ဘာဖြစ်မှာလဲ ??? လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေကို နေ့စဉ် မဝတ်သင့်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ မဝတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ ၁။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းတယ် အတွင်းခံမဝတ်ခြင်းက အမျိုးသမီးအင်္ဂါအတွက် လေဝင်လေထွက်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပါတယ် ။ မိမိရဲ့ အမျိုးသမီးအစိတ်အပိုင်းကို အောက်ခံဘောင်းဘီတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတာကြောင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းကောင်းရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီလို လေဝင်လေထွက်မရှိခြင်းက အမျိုးသမီးအင်္ဂါကျန်းမာရေးကို အနှောင့်အယှက် ရှိစေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေကြောင့် ပိုးဝင်ရောက်ခြင်းမှလည်း ကင်းဝေးစေမှာပါ ။ […]
ယောက်ျားတချို့ကို အင်မတန် စိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ သုက်လွှတ်မြန်ခြင်း အကြောင်းကလေး ရေးပါရစေ။ အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်မှဖတ်ပါ (၁) ကို ရေးပြီး၊ ဒီကြားထဲ တခြားအကြောင်းတွေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (၂) ကို ဆက်ရေးရင်၊ ဒီရောဂါ အထူးကု ထင်မှာစိုးလို့ပါ။ မဟုတ်ရင်တောင် အထူး စိတ်ဝင်စားသူလို့ မြင်နိုင်တယ်လေ။ ဆရာဝန်ဆိုတာ သိသာ သိစေ၊ မမြင်စေနဲ့ ဆိုသူထဲမှာ ပါတယ်။ မဖတ်စေနဲ့ မဟုတ်လို့ ရေးရပါမယ်။ နားလည်မှု မလွဲကြစေချင်ပါ။ “စိတ်ဝင်စားသူ” ဆိုတာလေး ချဲ့ပြောရရင် ဖို-မ ဆက်ဆံရေးကို စိတ်မဝင်စားပါဘူးလို့ ပြောလိုက်တာဟာ ဖုံးကွယ် ပြောတာပါ။ ဒီကိစ္စမျိုးက လူပျိုပေါက် မရောက်သေးတဲ့ အရွယ်ကစပြီး၊ သွေးဆုံးချိန်လို့ ပြောလေ့ရှိတဲ့ အသက် ကျော်တာတောင် စိတ်ထဲမယ် […]